ပန်ဒိုရာ: Avatar (သို့မဟုတ်) ခရမ်းပြာတောအုပ်က သဘာဝနဲ့ ရစ်ပတ်နွယ်ငင်
Posted by pandora at 5:19 PM
အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ဇာတ်လမ်းထက် အဲ့ဒီလို တွေးရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က အများကြီးချဲ့ကားလေးနက်စွာ မတွေးနိုင်သူမို့ တီပန့်အတွေးတွေ အများကြီးကို ဖတ်သွားတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အောင်မြင်မှုကတော့ ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ James Cameron ကို The king of the world လို့ အမည်တပ်တာ ဒီနိုင်ငံထုတ် မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
မောင်တွေ အစ်မတွေကတော့ သွားကြည့်ပြီးသွားကြပြီ။ မမေတယောက်ပဲ မကြည့်ရသေးတာ။ သဘာဝလွန်အဖြစ်အပျက်တွေ သိပ်မကြိုက်လို့။ (2012 လဲ ပြီးအောင် မကြည့်ဖြစ်ဘူး။) ဒီဇာတ်ကားကို တော်တော်များများကတော့ ညွှန်းကြတာပဲ။ မမေကတော့ သဘာဝလွန်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့စာရင် လူ့လောကထဲက သဘာဝကျကျ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ခပ်ရိုးရိုးတင်ပြတာမျိုး ပိုသဘောကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြုံရင်တော့ ကြည့်ပါအုံးမယ်။
မမပန်ပြောသလို တွေးစရာတွေ အများကြီးနဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဇွန်လည်းကြိုက်လွန်းလို့ နှစ်ခေါက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးတစ်ခေါက်၊ 3Dနဲ့တစ်ခေါက်။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်ဖို့တောင် စဉ်းစားမိသေးတယ်။ လနာမည်က ပန်ဒိုရာဆိုလို့ အစ်မဘလော့ကိုတောင် သတိရလိုက်သေးတယ်။း)
Yes, Pan Pan ...I See You...:D
I see you, Pan Pan.
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးနေနိုင်ဘူးဗျ။ နည်းပညာကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်နေတာနဲ့။ ဒါနဲ့ မင်းသားရဲ့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်က မော်တာတပ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင် မဟုတ်တာတော့ ဆိုးသဗျာ။
သွားကြည့်ဖို့ အခုလို တိုက်တွန်းတဲ့
ပန်ပန့်ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါအုံးမယ်...း))
Yes...we B discuss..later...enjoy ur weekend :)
ရေနွေးခွက်ထဲ ဖြည့်တဲ့ ဥပမာက Forbidden Kingdom ထဲမှာလည်း ဂျက်ကီချန်းက သူ့တပည့်လေးကို ပြတယ်ဗျား..။ ဇင်ဘာသာတရားရဲ့ နာမည်ကျော် ဥပမာ ဥပမေယျနဲ့ တူပါရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. I see You စာတန်းလေးကတော့ စွဲငြိစေတယ် အစ်မရေ
၂၀၀၉ တစ်နှစ်လုံး ကြည့်ဖြစ်သမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးကားပါပဲ အစ်မပန်ဒိုရာ။ ပန်ဒိုရာလနဲ့ မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ အစ်မပန်ဒိုရာကိုတောင် သတိရလိုက်မိပါသေးတယ်း) တွေးစရာတွေ Message တွေကို တင်ပြပုံ ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ သေသေသပ်သပ် ပြသွားတာ ၁၆၂ မိနစ်လုံးလုံး ကိုယ်ပါ ပန်ဒိုရာပေါ်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ ညီမလည်း ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ကြည့်ဖို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ အခု အစ်မရေးထားတာဖတ်ပြီး ပြန်ကြည့်ရရင် အတွေးသစ်တွေ ထပ်ရမှာပဲ...
အဲဒီနေ့က မလိုက်ရလို့ ငိုနေတယ် :P
အဲဒီကားကို ကြည့်မယ် ကြည့်မယ်နဲ့သွားမကြည့်ဖြစ်သေးဘူး..။ အစ်မပြောမှ ပိုပြီးအားတက်လာတယ် ဒီတစ်ပတ်သွားကြည့်ဖြစ်အောင်သွားမယ်...။ ခုလို Avatar ကိုအစ်မအမြင်လေးနဲ့ရှင်းပြပေးသွားတာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ Thanks “Pandora” I see you...
ပန်ဒိုရာလပေါ်ကို သုံးနာရီနီးပါး ရောက်သွားလို့ ကျေနပ်မိတယ်၊
ပျံသန်းတဲ့အကောင်ကို စီးပြီး ကိုယ်လည်း ပျံချင်တယ်၊
နောက်ခံသီချင်းကလည်း ကောင်းတော့ အသက်ဝင်နေတယ်။
အဲဒီကို တကယ် သွားချင်မိတယ်။
ကျနော်တို့ ဆီမှာ4D နဲ့ ပြနေပြီ။world first လို့ ပြောတယ်။သွားကြည့် အုံးမယ်။
I see you Pan Pan..
ကျွန်တော်လည်း ကြည့်တော့ကြည့်ပြီးသားပဲ..ဒါပေမယ့် အစ်မပြောသလို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဦးမယ်